I-Redmi Qaphela i-8 kunye neNqaku le-8 Pro: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuqaliswa | I-Androidsis
I-Redmi Qaphela i-8 kunye neNqaku le-8 Pro: Uluhlu oluphakathi lwegama elitsha
Njengoko bendipapashiwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, Inqaku leRedmi 8 kunye neNqaku 8 Pro sele zinikiwe ngokusemthethweni. Uluhlu oluphakathi kwinqanaba lophawu lwaseTshayina luhlaziywa ngezi fowuni zimbini zintsha. Kwezi veki sifumene uninzi lweendaba malunga nale modeli, ezisivumele ukuba sibe nombono ocacileyo malunga nokuba silindele ntoni na kulo msitho wentetho.
Uphawu lwaseTshayina lusishiya sineemodeli ezimbini eziphakathi, kugxilwe ikakhulu kwiikhamera zalo. Ukusukela kwiNqaku leRedmi 8 kunye neNqaku 8 Pro yima ngakumbi kwicandelo lokufota, ulwazi ukuba sikwazile ukudibana kutshanje. Ukongeza, imodeli yePro yifowuni yesibini kwintengiso kuyo unekhamera ye-64 MP.
Uyilo luyafana kwizixhobo ezibini, ezifika nazo isikrini esinotshi emile okwethontsi lamanzi. Ke ikuvumela ukuba uthathe ithuba elingaphambili lomnxeba, ukuze usebenze ngcono. Ngasemva sineekhamera ezininzi, ezahluka ngokuxhomekeka kwimodeli ekuthethwa ngayo, kodwa zombini zisishiya sinenzwa yomnwe wangasemva.
1 Ukucaciswa kweRedmi Qaphela 8 kunye neNqaku 8 Pro
Ukucaciswa kweRedmi Qaphela 8 kunye neNqaku 8 Pro
Kwezi veki, yinxalenye yefayile ye- Ukucaciswa kwezi ziNqaku zeRedmi 8 kunye neNqaku 8 Pro. Oku kusivumele ukuba sibe nombono ocacileyo wento esinokuyilindela kwezi modeli zimbini zintsha. Zombini zifika phakathi kuluhlu oluphakathi lophawu lwesiTshayina, olubizelwe ukuba lube yimpumelelo kweli candelo lentengiso, njengoko sibonile kwiifowuni zangaphambili zorhwebo lwaseTshayina ngale ndlela. Ezi yinkcazo epheleleyo yeefowuni ezimbini:
QAPHELA 8 XNUMX
QAPHELA I8 Pro
I-IPS LCD ye-6,3 intshi ene-HD epheleleyo + isisombululo I-IPS LCD ye-6,53 intshi ene-HD epheleleyo + isisombululo
Qualcomm Snapdragon 665 Imithombo yeendaba ye-MediaTek Helio G90T
I-4 GB / 6 GB I-6 GB / 8 GB
I-64 GB / 128 GB I-128 GB / 256 GB
I-48 MP + 8 MP i-angle ebanzi + i-2 MP ubunzulu + i-2 MP macro I-64 MP + 8 MP i-angle ebanzi + i-2 MP ubunzulu + i-2 MP macro
I-Android 9 Pie ene-MIUI I-Android 9 Pie ene-MIUI
4.000 mAh ene-18W yokuTyala ngokukhawuleza 4.500 mAh ene-18W yokuTyala ngokukhawuleza
4G, i-Wi-Fi ac, i-USB C, i-minijack, i-Bluetooth, i-GPS, i-GLONASS 4G, i-Wi-Fi ac, i-USB C, i-minijack, i-GPS, i-GLONASS, iBluetooth, iSIM ezimbini
Umfundi ongasemva weminwe, i-NFC, ukuvula ubuso Umfundi ongasemva weminwe, i-NFC, ukuvula ubuso
158.3 x 75.3 x 8.35 mm kunye ne-190 gram 161.35 x 76.4 x 8.79 mm kunye ne-199,8 gram
Ezi fowuni zimbini ziboniswa njengezinto ezilungileyo kakhulu phakathi kuluhlu oluphakathi. Uyilo luyafana, nangona kwinqanaba lobuchwephesha sinokubona umohluko phakathi kwezi zimbini. Ukukhethwa kweprosesa kwimodeli yePro yinto emangalisa abaninzi, nangona iyimodeli ejolise kwimidlalo phakathi kuluhlu oluphakathi. Ke sinokulindela ukusebenza kakuhle kule processor, ukongeza kubukho bokupholisa ulwelo kwifowuni.
Iikhamera ngokungathandabuzekiyo yeyona nto ibalulekileyo kwezi Redmi Qaphela 8 kunye neNqaku 8 Pro.Imodeli eqhelekileyo ifika ngenzwa ye-48 MP njengeyona iphambili, ihamba nezinye iikhamera ezintathu, ezifanayo kwiifowuni zombini. Nangona kwimodeli yePro Sinokubona isivamvo esilindelweyo se-MP eyi-64, ebesele ibhengeziwe kwiiveki ezidlulileyo. Inzwa yesamsung, ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zinto zinomtsalane kule fowuni. Enkosi ngayo, iifoto zinokuthathwa ngesisombululo seepikseli ezingama-9248 x 6936.
Ezi fowuni zimbini zifika ngenzwa yeminwe engasemva, ukongeza ekuvulekeni kobuso. Sikwafumana i-NFC kuzo zombini, ukuze sikwazi ukwenza iintlawulo ezihambayo. Iibhetri zikhulu kuzo zombini iimeko, ukuzimela kakuhle, ukongeza kwinto yokutshaja ngokukhawuleza.
Okwangoku iqinisekisiwe kuphela ukumiliselwa kwezi Redmi Qaphela 8 kunye neNqaku 8 Pro e China. Asazi ukuba bazakuqaliswa nini ngaphandle kwelizwe laseAsia, nangona kungafanelekanga ukuba kuthathe ixesha elide. Ezi modeli zimbini ngokuqinisekileyo ziya kuphehlelelwa eSpain, kodwa kuya kufuneka silinde isiqinisekiso esivela kuhlobo lwaseTshayina malunga noku.
Ezi fowuni zimbini ziya kuphehlelela ngemibala eyahlukeneyo, njengombala mnyama, luhlaza okanye ngwevu. Ukongeza, sifumana iinkqubo ezintathu ezahlukeneyo nganye nganye, ngokwe-RAM kunye nokugcinwa. Ke abathengi banokukhetha kwimeko nganye. Inqaku elibomvu leRedmi 8 liza kufika kunye nokudityaniswa, Amaxabiso ayo e-China asemthethweni:
Imodeli ene-4 GB / 64 GB inexabiso nge-999 yuan (malunga ne-126 euro ukuyitshintsha)
Inguqulelo ene-6 GB / 64 GB iya kubiza i-1199 yuan (malunga ne-151 euro ukuyitshintsha)
Imodeli ene-6 GB / 128 GB isungulwe ngexabiso le-1399 yuan (malunga ne-177 euro ukuyitshintsha)
Inqaku leRedmi 8 Pro lisungulwe nayo kwiinguqulelo ezintathu ze-RAM kunye nokugcinwa. Amaxabiso abo e-China ngolu hlobo lulandelayo:
Inguqulelo ene-6 GB / 64 GB ibiza i-1399 yuan (malunga ne-177 euro ukuyitshintsha)
Imodeli ene-6 GB / 128 GB inexabiso nge-1599 yuan (malunga ne-202 euro ukuyitshintsha)
Inguqulelo yefowuni ene-8 GB / 128 GB inexabiso nge-1799 yuan (malunga ne-227 euro ukuyitshintsha)
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Redmi Qaphela i-8 kunye neNqaku le-8 Pro: Uluhlu oluphakathi lwegama elitsha
Imowudi emnyama iza kwi-Outlook ukuze izakusebenza kuzo zonke ii -apps zeOfisi
I-Pokémon Masters ngoku iyafumaneka! Ngoku ungahambisa esona sihloko silindelweyo sonyaka